Filoha Rajoelina – “Sosialim-bahoaka”: «Tsy tokony hisy intsony hitaraina fa tsy nahazo Vatsy tsinjo» | NewsMada
Filoha Rajoelina – “Sosialim-bahoaka”: «Tsy tokony hisy intsony hitaraina fa tsy nahazo Vatsy tsinjo»
Mazava ary tsotra ny hafatra. Nampanantena ny filoha Rajoelina Andry ny faran’ny herinandro teo fa mijery ny sosialim-bahoaka ny fanjakana. Tanterahina ao anatin’ny mangaraharaha avokoa izany, indrindra ny lafiny fitantanana ny vola.
« Tsy tokony hisy intsony hitaraina fa tsy mahazo fanampiana, saingy aoka ireo manana fahefa-mividy afaka miatrika izao krizy izao tsy hiady anjara amin’izany. Tsy maintsy mahazo avokoa ireo mila izany. Ilaina ny fahatongavantsika saina… Aleo ireo tsy manana na ireo tena sahirana no omena fanomezana », hoy ny filoha Rajoelina Andry, tetsy Malacam, Antanimena ny faran’ny herinandro teo. Nanokatra ny fanombohan’ny hetsika « Sosialim-bahoaka » eto an-dRenivohitra ny tenany tamin’izany ka nizara vary iray gony, miampy CVO sy menaka, ronono, voamaina, sira ho an’ireo tokantrano miisa 2 000. Tohin’ny hetsika efa natao tany Nosy-Be izany ary fisantarana kosa ho an’ny eto Antananarivo. Notsiahiviny fa nanokana vola 72 miliara Ar na 20 tapitrisa dolara ny fanjakana. Hozaraina sy hotsinjaraina ary ho tonga any an-tokantranon’ny tsirairay, indrindra amin’ireo faritra tena voadonan’ny Covid-19 izany ka amin’ny alalan’ny endrika fanampiana tahaka izao izany. Maherin’ny 200 000 ireo hisitraka izany eto an-dRenivohitra. « Aleo fanampiana maharitra kokoa ahafahana miatrika ny 15 andro na amam-bolana, hitsinjovana anareo. Tsy vary dimy kilao fa iray gony ary natao betsaka ny anjaran’ny isan-tokantrano », hoy izy.
Fanatsarana ny karnem-pokontany
Nanome toromarika ny kaominina Antananarivo Renivohitra koa ny tenany ka nilaza fa havaozina hifanaraka amin’ny toetrandro ny karnem-pokontany. Izany hoe, amin’ny alalan’ny teknolojia. « Hisorohana ny gaboraraka amin’ny fizarana fanampiana tahaka izao izany. Hisy marika manokana ny karne ahafantarana ny mponina eo amin’ny fokontany. Ohatra, ahafantarana ireo tonga mivory na tsia. Na koa ahalalana ireo efa nahazo fanampiana na tsia koa », hoy izy. Namaranan’ny filoha izany ny nilazany fa ho resy tsy ho ela ny Coronavirus.
Tsy hiandry ela fa hiroso amin’ny fizarana ny Vatsy tsinjo eny anivon’ny fokontany ireo boriborintany, anio. Hisy ny hotanterahina eny an-kianja fa eo koa ireo aterina isan-tokantrano, ialana amin’ny fitangoronana noho ny valanaretina.
Anisan’ny niatrika izany ireo mpikambana vitsivitsy ao amin’ny governemanta notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian. Teny koa ny governoran’Analamanga, Rasoamaromaka Hery, ary ny ny ben’ny Tanànan’ Antananarivo-Renivohitra, Andriantsitohaina Naina. Manampy izany ireo depiote voafidy amin’ireo boriborintany.